Earning Online Myanmar
Free7Movies6:11:00 AMHow To Earn 16 comments
Free7Movies1:39:00 AMPROCESSOR3comments
PayPal4digit code ကိုဘယ်လိုယူရမလဲ
Free7Movies1:28:00 AMPROCESSOR No comments
အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ ဒီနေ့ Paypal ကပို့ပေးလိုက်တဲ့4digit code ကိုဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Paypal Account လျှောက်ရတာ လွယ်ကူပေမဲ့ မိမိတို့ Paypal Account Verified ဖြစ်ဖို့ကမတတ်တဲ့လူတွေအတွက်နည်းနည်းခက်တယ်ဗျာ။ အဲဒါကြောင်းဒီနေ့ အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာကြည့်လိုက်ကြပါ.....
Free7Movies11:36:00 PMHow To Earn No comments
အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ဟူသည်>>ကြိုးစားသူများအတွက်သာဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေသင်အောင်မြင်ချင်ရင် ဇွဲ ၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယ ရှိ့မှ ဖြစ်မှာပါ။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျွန်တော် အခု တစ်ခေါက် တင်ပြမှာကတော့ Online ပေါ်မှာ ငွေကို ဘယ်လို ရှာရမလဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခု ကျွန်တော်တို့ ပြုလုပ်မှာကတော့ Paid to Click (PTC) ကြော်ငြာ ကလစ်တဲ့ လုပ်ငန်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို အချိန်ဘယ်လောက်မှ ပေးရမှာ မဟုတ်ပါဘူး သေချာ ထိုင်လုပ်ပါက ၁၀ မိနစ် ကျော်ကျော်သာ လုပ်ရပါတယ်။ ဒီအလုပ် လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဇွဲ ၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယ ရှိ့မှ ဖြစ်မှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း နှစ်နဲ့ ချီပြီး လုပ်ရမှာ မို့ပါ။ အင်တာနက်က ပိုက်ဆံကို ဘယ်လို ထုတ်ရမှာလဲ ဆိုပြီး တစ်ချို့က မေးကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကို နောက်ပိုင်းမှာ ရှင်းပြထားပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်က အခု မိတ်ဆွေတို့ အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်ပြေအောင် ရှင်းပြ ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ PTC Website တွေထဲမှာတော့ ဒီ Website ကတော့ ငွေပေးမှန်ကန်ခြင်း ယုံကြည်စိတ်ချရမှု့ 100% အပြည့်ရှိခြင်းကြောင့် လုံးဝကို အလုပ်လုပ်သင့်တဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပါ။ ပထမဦးဆုံး အဆင့် အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ ဆိုဒ်မှာ Register လုပ်ပြီး Member တစ်ယောက် ဖြစ်အောင် လုပ်ရပါ့မယ် ။ Company တစ်ခုမှ အလုပ်ဝင်လျှောက်တာပေါ့ဗျာ.. ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် တစ်ခု သတိပေးချင်တာက Register လုပ်ရုံနဲ့တော့ ဥံဖွ ပိုက်ဆံ ဖြစ်လာမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး သူ့ပိုက်ဆံလိုချင်ပါက ကိုယ်ဘက်ကလဲ ပေးဆက်မှု့ဆိုတာ ရှိရပါတယ် ။ ကိုယ့်ဘက်က ဘာပေးဆက် ရမှာလဲဆိုတော့ နေ့စဉ်ပုံမှန် သူပေးထားတဲ့ ကြော်ငြာ တွေကို ၁၀ မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီး ကလစ်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပြီ ဒီ Website မှာ ကြော်ငြာကလစ်ရုံမဟုတ်ပဲ တခြားဝင်ငွေရှာနည်းတွေလည်းအများကြီပါသေးတယ်။ အဲဒါကကိုယ့်ဖါသာကိုယ်လေ့လာပြီးလုပ်သွားကြပေါ့။ နောက်ပြီ ဒီ Website မှာ ဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲ ဝင်ငွေရနေမဲ့နည်းလမ်းက အစုShares ဝယ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ Shares တစ်စုကို $10.00 ပဲပေးရပါတယ် ရက်ပေါင်း၆၀ဆိုရင်
Total return after 60 days $12.6
Standard Member တစ်ဦးအား အစု Shares ၅၀ အထိဝယ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။
အဲဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့တွက်ကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်... တကယ် Site ကောင်းလေးတစ်ခုပါဗျာ။
မိမိတို့ Paypal Account, Perfect money Account တို့ကနေငွေသွင်းပြီး Account Upgrade လုပ် Shares တွေဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မနက်ဖန်ဆိုတာနီးနီးလေးပါ။
အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် ဒီဆိုက်မှာ(၁)နှစ်တိတိအလုပ်လုပ်တဲ့ မာန်ဘာကို $10 ပေးသွားမည်။
(၁)နှစ်ပြည့်တဲ့အခါ မိမိတို့ username ကိုပြောပါ။
သတိ မာန်ဘာ (၃၀၀)ဘဲလက်ခံသည် မြန်မြန်ဝင်လုပ်ကြပါ။
Okay ! စိတ်ဝင်စားလို့ အလုပ်လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အရင်ဦးဆုံး Register လုပ်ဖို့အောက်ကပုံကိုကလစ်ပါ။
Free7Movies7:29:00 AMPAYING PTC SITES9comments
Clicks Ref. Clicks Min.Cashout Processor Payout.Time
0.01$ 0.01$ $2 Skrill/Neteller Instant
Since: 2009-05-23 အသုံးပြုနည်း ဒီမှာကြည့်ပါ။
0.005$ 0.001$ $1 PayPal/Skrill 7.Day
Since: 2013-02-01 အသုံးပြုနည်း ဒီမှာကြည့်ပါ။
0.005$ 0.005$ $4 PayPal/Perfect Money 7.Day
Since: 2016-10-11 အသုံးပြုနည်း ဒီမှာကြည့်ပါ။
0.005$ 0.005$ m 0.1 Bitcoin Instant
Since: 2016-01-26 အသုံးပြုနည်း ဒီမှာကြည့်ပါ။
0.00066$ FAUCET$ No.Min Bitcoin Instant
Since: 2016-12-25 အသုံးပြုနည်း ဒီမှာကြည့်ပါ။
FAUCET$ FAUCET$ No.Min Bitcoin Instant
0.01$ 0.01$ 5,000 Satoshi Bitcoin Instant
Since: 2014-00-00 အသုံးပြုနည်း ဒီမှာကြည့်ပါ။
0.01$ 0.01$ 3$ Perfect money/Bitcoin 7.Day
0.01$ 0.01$ $2 PayPal/Bitcoin 7.Day
Since: 2013-03-00 အသုံးပြုနည်း ဒီမှာကြည့်ပါ။
0.01$ 0.01$ 0.0004.B Perfect money/Bitcoin Instant
2.5D 2.5D 50.D Dogecoin Instant
Since: 2017-00-00 အသုံးပြုနည်း ဒီမှာကြည့်ပါ။
0.0002L 0.0002L 0.001L Litecoin Instant
bitcoin ကို မြန်မာငွေထုတ်ချင်ရင် ဘယ်လို ထုတ်ရမလဲ?
Free7Movies9:25:00 PM No comments
အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ ဒီနေ့အချိန်နည်းနည်းရတော့ keymo luck ဆိုတဲ့ညီလေးတစ်ယောက်ရဲ့မေးခွန်းကိုဖြေပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဆရာကြီးတွေကကျော်သွားလိုက်ပေါ့။ ONLINE မှာဝင်ငွေရှာခါစမိတ်ဆွေများအားလုံးအသိချင်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုပေါ့ဗျာ။ bitcoin ကို မြန်မာငွေထုတ်ချင်ရင် ဘယ်လို ထုတ်ရမလဲ? bitcoin ကို မြန်မာငွေထုတ်ချင်ရင် perfectmoney OR payeer နဲ့ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ မိမိတို့စုဆောင်းထားသော coinbase Acc. မှာရှိတဲ့ bitcoin တွေကို changer သုံးပြီး perfectmoney OR payeer သို့ USD ပြောင်းရပါမယ်။ ပြောင်းနည်းကိုအောက်မှာ Video နဲ့ပြပေးထားပါ။ ပြောင်းလို့ရလာတဲ့ USD ကို perfectmoney OR payeer ကနေ မိမိတို့ BANK & VISA CARD & MASTER CARD တွေနဲ့မြန်မာငွေအဖြစ် ဘယ်အချိန်မဆိုထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ရွှေလိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့ bitcoin ကို ရှာပြီး စုမယ်
Free7Movies9:07:00 AM No comments
bitcoin ရှာချင်သူတွေအတွက် ပုံနှင့်တကွပြပေးထားပါတယ် ကျနော်အကြိုက်ဆုံးဆိုက်တွေပါ...တကယ်ပေးလို့လေ...စာဖတ်သူလည်းတွေ့ရင်ကြိုက်သွားမယ်..